Golaha Wasiirada oo ansixiyey guddiyo kala duwan – Kasmo Newspaper
Golaha Wasiirada oo ansixiyey guddiyo kala duwan
Updated - May 10, 2015 2:32 pm GMT
Khamiis, May 09, 2015; Golaha Wasiirrada Soomaaliya ayaa Anisixiyay guddiyada madaxabanaaan ee Doorashooyinka, Golaha Adeegga Garsoorka iyo Guddiga Xuduudaha, kaddib kulan ay Muqdihso ku yeesheen.
Xubnaha golaha wasiirrada ay guddiyada ay ansixiyeen ka yeeshay dood in muddo ah socday, waxaana guddiyadan Hor-keenay golaha Wasaaradaha Caddaaladda iyo Arrimaha Gudaha iyo Federaalka, waxay si aqlabiyad ah ku ansixiyeen saddexda guddi ee la horkeenay.
Wasiirka Caddaaladda Somalia, C/llaahi Axmed Jaamac (Ilka-jiir) oo la hadlay warbaahinta ansixinta kaddib ayaa akhriyay magacyada toddoba xubnood ee ku guuleystay inay ka mid noqdaan guddiga Adeegga Garsoorka, kuwaasoo dhawaan lagu soo dari doona labada xubnood oo ka dhiman.
Sidoo kale, Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Federaalka Somalia, C/raxmaan Maxamed Xuseen (Odawaa) ayaa isna sheegay in gudiyaadan qorshahoodu ahaa in la dhiso muddo 60-casho gudahooda sanadkii 2012-kii kaddib markii la ansixiyey xukuumaddii ugu horaysay, waxaase maanta ku guuleysannay inaan kusoo dhisno guddigaas muddo bil gudaheeda ah, kaddib markii ay magacowday horraantii bishii hore guddiyadii soo xuli lahaa. Waxaana isku soo taagay inay ka mid noqdaan labadan guddi 356-qof oo Qaybaha kala duwan ee bulshada ka koobnaa.
Guddigan markii lasoo kala saaray ayaa maanta Golaha Wasiirradu waxaa la hor-keenay 46-xubnood si looga soo dhex xulo 18-xubnood oo kala noqon doona guddiga madaxa-bannaan ee Doorashooyinka iyo kan Xuduudaha iyo Federaalka. Dood dheer kaddib waxaa cod aqlabiyad ah lagu ansixiyay 18-xubnood oo min sagaal ah oo labadan guddi ka kooban, kuwaasoo kala ah;
9. Khaliif C/kariin Maxamed.
Ugu dambeyn, Wasaaradda Maaliyadda Somalia ayaa soo jeedisay sidii wax looga Qaban lahaa gaadiid dowladdu leedahay oo ku jira gacanta shacabka, iyadoo goluhu isku raacay magacaabista guddi ka kooban Wasaaradaha Gaadiidka Cirka iyo Dhulka, Maaliyadda, Amniga Qaranka, Xeer-ilaaliyaha Qaranka iyo Hanti-dhowrka guud, inay soo diyaariyaan habka ugu wanaagsan oo gawaaridaas dib loogu soo celin lahaa gacanta dowladda.